MSF WAXAAN KA NAXANAY WEERARKII KOOXADANADA EE KISMAAYO - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
MSF oo si ku meel gaar ah u ugala baxday shaqaalaheedii caalamiga ah ee soomaaliya
Dhakhaatiirta Aan Xuduudda Lahayn – Médecins Sans Frontières (MSF) waxa ay si aad ah u dhibsadeen ugana xumaadeen waxa u muuqday weerar qorshaysan kaasoo keenay dilka seddex ah jeelkanaga Victor, Damien iyo Maxamed Bidhaan, iyo laba qofood oo kale, Isniintii 28 Jannaayo loogu geystey Kismaayo, Soomaaliya.Si aanu u muujino ixtiraamkeena, iyo xaaladaha la xiriira weerarkan oon caddayn, MSF waxa ay go’aansatey in ay Soomaaliya kala soo baxdo si ku meel gaar shaqaalaheedii caalamiga ahaa.“Waxa aan u aragnaa falkaan lagula kacay mid ka mid ah kooxaheena mid haba yaraatee aan loo dul-qaadan karin” ayuu yiri Christophe Fournier, Madaxweynaha Golaha Caalamiga ah ee MSF, “iyo weliba in ay tahay ku-tumasho ballaaran oo lagu tuntey dadaalka bani’aadamnimada kaas oo saaxiibadeena geeriyooday aad ugu weynaa.”
Siddeetan iyo toddoba shaqaale caalami ah ayaa laga soo saarey 14 mashruuc oo ka socdey Soomaaliya. “Weerarkani waxa uu saameyn toos ah ku leeyahay heerka gargaarka dadweynaha Soomaaliyeed gaari lahaa”, ayuu raaciyey Dr Fournier. “In kasta oo hawlaha caafimaad ee nolosha lagu badbaadinayo ay socdaan ayna wadaan, kormeerayaanna shaqaalaheena Soomaalida ah, waxaa cad in shaqaalaha la soo saarey ay wax u dhimeyso hawlaha caafimaad ee aasaasiga ah ee MSF ay ka waddo Soomaaliya.”
Sida ay MSF ka dhawaajisay dhawr jeer ooh ore sanadkii la soo dhaafay, arrintani waxa ay timid waqti Soomaaliya ay soo foodsaartey xaalad degdeg ah oo ay rabshaduhu ka sii daryaan, qaxu aad u badan yahay, oo baahi caafimaadna oo aan la daboolin ay jirto. Tirada dadka ku dhimanaya goobo badan ayaa aad uga sareysa inta caadiga ah ee dhimata marka lagu jiro xaaladaha degdegga ah. Boqollaal kun oo Soomaali ah ay la harjadayaan nolosha si degdeg ahna ugu baahan gargaar dhakhso ah ah oo ka yimaada bulshada caalamka. Bulshadan ayaa iyagana ah dhibanayaal ay si aan toos ahayn u saamaysay weeraradan ku aadan dadkan u shaqaynaya samafalka bini aadminimo;
MSF waa ay ka go’an tahay in ay inay kaalmayso Soomaaliya laakiin maaddaama ay tahay urur dhex-dhexaad ah oo madax-bannaan, MSF waxa ay dugsaneysaa oggolaanshaha, taageerada iyo ilaalinta bulshada Soomaaliyeed si aan u gudanno hawsheena. Waxaa kale oon ugu baaqaynaa dhammaan kooxaha iyo kuwa iska soo horjeeda in ay ixtiraamaan shaqada shaqaalaheena wadaniga iyo kuwa caalamiga ah kuwaas oo xil weyn iska saarey daweynta Soomaalida sida aadka ah ugubaahan daryeelka caafimaad.
MSF waxa ay si joogto ah uga soo shaqeyneysey Soomaaliya Muddo 16 sano ka badan haddana waxa ay daryeel caafimaad siisaa kow iyo toban gobol oo ka mid ah dalka. Intii aan dalka laga soo saarin waxaa dalka ka shaqeynayey 90 shaqaale caalami ah iyo in ka badan 800 shaqaale degaanka ah. Sannadkii 2007, waxaa la furey mashaariic dhowr ah oo cusub iyada oo looga jawaabayey xaaladaha caafimaad iyo kuwa bani’aadanimo ee ka dhashey dagaalka. Kooxaha caafimaadku waxa ay sameeyeen in ka badan 1500 oo qaliin ah; waxayna daweeyeen in ka badan 520,000 oo bukaan-socod ah waxaana ay seexiyeen cusbitaallada qiyaastii 23,000 oo bukaan jiif ah.